Ukutya kwabantwana ukunyamezela
Umngeni obunzima kubazali ngumntwana wesondlo somntwana. Oku kudinga indlela ekhethekileyo, ekubeni ukutya kufuneka kucatshangwe ngokucokisekileyo. Ayanele ngokwaneleyo ukukhawulela umntwana ekudleni, ngoko unokuthi ungadlwengula imeko yezempilo yakhe. Kwaye konke ngenxa yokutya ngokwayo akuyiyo imbangela yokugula, isizathu sokuba umzimba womntwana awukwazi ukucwangcisa ngokupheleleyo kwaye ulungele ukutya. Kwaye ukuphendula kule nkqubo yinto engafanelekanga.
Iimfuno zokuncedisa ukondla kokunyuka komntwana kumntwana omncinci
Kukho iindlela ezimbalwa zokutya ngokutya, apho unokwenza ukutya kwintsana encinane kune-allergenic. Ngokomzekelo, ukuba iifatata eziluhlaza, zinyulwe ngokukhawuleza, zityhutyhile iiyure eziliqela kumanzi abandayo, ukutshintsha ngokukhawuleza, unokususa ininzi yesitashi kunye ne-nitrate kuyo. Kufuneka wenze kwakhona i-groats: ukuze uhlambulule ukungcola okungaphezulu, ngaphambi kokupheka, cwina ngeeyure ezimbini okanye ezintathu.
Xa upheka inyama, ungakulibali ukukrazula umhluzi wokuqala, kwaye ukususela kumhluzi ocolile sele udinga ukususa onke amanqatha. Kuyinto efiselekayo ukupheka izitya ezingaphezulu zomntwana, ukupheka, ukumisa okanye ukupheka isibini. Ukutya okuthosiweyo kunobungozi kubantu abaphikisayo. Iziqhamo ezininzi zithintela ukutshatyalaliswa, ukuba isithelo siyabhaka okanye sipheka, kwaye ukuba ifom ekhusileyo iyingozi, ngoko ekuphatheni kuyingozi.
Ungesabi ukuba phantsi kwemimiselo enjalo umntwana wakho uya kulamba okanye anqatshelwe into "enhle". Khumbula ukuba uninzi lwezibambiso zifunwa kuphela ngexesha elide, ukuba ngokusebenzisa ukutya kunokunqoba i-allergies, iimveliso ezingavumelekanga ziya kuba ngaphantsi kwexesha.
Ukunyusa umntwana ojongene nokugula, into ephambili kukuba kususwe umkhiqizo obangela ukungalunganga komzimba. Ukufumana ukuba umzimba uthatha njani izitya ezahlukeneyo. Abazali bacetyiswa ukuba babhale uluhlu lwazo zonke iimveliso ezisetyenziswa ngumntwana yonke imihla, kwi-diary yokutya. Xa kuveliswa umkhiqizo omtsha, kubalulekile ukuba uqaphele umthamo wesahlulo kunye nexesha lokusetyenziswa, uze ulandele kwaye ubhale umphenduli womzimba kuwo (umz.
Izitsha ezintsha zomntwana zilungele ukusa kusasa, zingekho ngaphezu kweetaspuni ezimbini, ngoko unako ukubeka iliso ukusabela komzimba yonke imini. Ukuba kwakungekho nhlobo yokuphendula, umhla olandelayo umlinganiselo womveliso unokwandiswa kwaye ngokuthe ngcembe, ngaphakathi kweveki, ukuletha umthamo wesitya kwisiganeko esifana nonyaka. Iimveliso eziqhelekileyo kufuneka zingabandakanywa ngokupheleleyo ekudleni kwithuba elinconywe ngunyango wezilwanyana.
Isondlo sokudityaniswa kwempilo yabantwana abadala
Ukulungelelanka ukutya okunempilo kubantwana abadala kunzima kunzima, oku kufuna indlela engqongqo ngakumbi kubazali. Iimveliso ezibangela ukuba utywala zivumelekile ukusetyenziswa kwexesha elide. Ukutya kuqukethe amanqanaba amaninzi.
Isigaba sokuqala, sihlala malunga neveki ezimbini, siwela ngexesha lokunciphisa umzimba. Kulo nqanaba lokutya, kufuneka ulahle ngokupheleleyo imveliso enokuthi ibe yingozi kwaye ibangele ukubola. Kwenqatshelwe ukuphelisa i-broth, i-spice, i-fried, i-salted, i-spicy, i-smoking, izitya ezikhethiweyo. Ngamanani amanqongophe, ukutya okusanhlamvu, iimveliso zepuphu, iimveliso zobisi, ushukela kunye netyuwa akuvumelekile.
Isigaba sesibini sesondlo sonyango siqala xa ukubonakaliswa kwezinto zokungabikho kwemvelo kuyanyamalala kwaye kuthatha iinyanga ezimbini ukuya kwethathu. Ngeli xesha, kuyimfuneko ukukhuphela ngaphandle kokutya kwe-baby allergen, kwakunye nemveliso, ngenxa yokuba kwenzeke ntoni ukuphambaniswa kwesiphambano.
Okwesithathu, ukubuyisela kwakhona, isigaba sokutya kunokuqala ukuba ukuphela kwenyanga yesithathu kuphele ngokupheleleyo ukubonakaliswa kwemvelo. Unokwandisa ukwandisa ukutya komntwana, ngokukhawuleza uqalise ukutya okuphazamisayo, ngaphandle kokufakela ngokuthe ngqo imveliso.
Ukuphinda ungene kwizinto zokutya eziyingozi kufuneka unikezwe ngamanani amancinci (malunga no-5-10 g) ekuseni, ukulawula ngokuthe ngqo ukuphendula kwendalo kunye nokwenza okuchanekileyo kwi-diary yokutya. Ukuba yonke into ihamba kakuhle, unokubuyela kwimpilo evamile.
Ukutshengisa i-jujube yabantwana kuyingozi
Indlela yokunciphisa umntwana ogqithiseleyo
Indlela yokupheka isobho semifuno yomntwana?
Ubisi lweebhokhwe ekudleni kwabantwana
Indlela yokubopha isaphetha kwi-pigtail
Indlela yokuziphatha ukuze umntu enze izipho?
IKrisimesi yeKrismesi 2016: Ndivuyisana, iingoma zengoma kubantwana, i-carols
I-Hair Hair Masks